Umcimbi wamaSiko ube yimpumelelo | News24
Umcimbi wamaSiko ube yimpumelelo
IQembu laKwaNyuswa elaziwa ngokuthi yi-Rieaco Bird Media ebeluhlele umcimbi wamaSiko Photo: nosipho mkhize
IQEMBU laKwaNyuswa elaziwa ngokuthi yi-Rieco Bird Media ibe nomcimbi wama Siko lapho bekukhangiswa ngoNobuhle nama Geza asemphakathini lo mcimbi obunesiqubulo esithi uNobuhle neGeza Heritage Day ubuse zinkundleni zemidlalo KwaNyuswa.
Kubonakale umphakathi ufika ngobuningi bawo uzothamela lo mcimbi obuhlanganise izinhlangaezahlukene.
Okhulumela abe-Rieco Bird Media uSibusiso Nzama uthe lo mcmbi ube yimpumelelo ngokuhlanganyela kwentsha, abadala, iziduna nama Khansela endawo.
“Lo mcimbi uhlanganise wonke amalungu omphakathi lapho bekukhonjiswa amathalente akhona emphakathini futhi uthokozelwe abahlukene kubalwa nalabo abathanda ezobuciko namaSiko.
“Lo mcimbi unike amalungu omphakathi ithuba lokuthi bagubhe amasiko ahlukahlukene . Labo abebe ngenele lo mncintiswano wonobuhle anama geza bebe lindeleke ukuba begqoke izingubo zesintu futhi amajaji akhethe loyo obashaye emakhanda. “Kwabe silisa kuwine uSfundo ‘Lah’ Ngcobo obe yigeza lo nyaka kwabesifazane kwa wina uLondeka ‘Sandla Sengcweti’ Zondi obe nguNobuhle womcimbi ka-2016.”
UNzama uthe iqembu lenza konke okuse mandleni ukuthi liqhakambise amathalente akhona emphakathini: “Kukona konke esikwenzayo ekuqhakambiseni amathalente emphakathini asifuni ukukhohlwa iSiko lethu Lokhu asikwenzanga kuphela ngokuthi kugqokwe imvunulo kodwa sikwenze nangoku ziphatha, inhlonipho nangomlando wesintu. Lo mcimbi ungomunye wemicimbi edonse amehlo eningi KwaNyuswa futhi umehluko siyawubona kwezobuCiko namaSiko. I-Rieco Bird Media ingezinye zezinhlangano ezaziwayo KwaNyuswa futhi isizenzele igama elihle emphakathini njengoba ilekelela intsha enamathalente ahlukene iphinde ilekelele labo abanama khono ahlukene. Okubalulekile wukuthi sifuna ukushintsha izimpilo zabantu abasha emphakathini.
“Sithanda ukubonga bonke abaxhasile kulo mcimbi ikakhulukazi ukhansela uMnuz Mthetheleli ‘Mthe’ Sibisi waku ward-103, sibonge uthishanhloko wesikole iKwaNyuswa Senior primary uMnuz Zondi, sibonge amalungu omphakathi waKwanyuswa nezitolo ezincane zasemphakathini (tuck shops), ngabe lomcimbi awubanga impumelelo ngaphandle kwalabo abasilekelelile. Siyethemba ukuthi umcimbi ka-2017 uzoza nokuningi okuhle.
Uma uthanda ukwazi kabanzi nge-Rieco Bird Media xhumana no-Able Zama Zuma enombolweni ethi: 0633989769 noma uSibusiso Nzama enombolweni ethi: 0739119912 noma uthumele umyalezi ngekheli le-email elithi: riecobirdonline@gmail.com